Tontolon’ny Bilaogy Shinoa : Fijerena Ny Taona Lasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2017 2:28 GMT
Mikasika ireo bilaogy fampiantranoana, nahatsapa fifaninanana henjana ny BSP rehetra taorian'ny fahazoan'i Bokee ny Blogdriver. Nahazo famatsiam-bola avy amin'ireo orinasa sahisahy mampiasa vola, izay nampiseho ny fahatokisany amin'ny fampiasam-bola ireo BSPs telo lehibe indrindra: Bokee, Blogcn sy Blogbus. Nahitana fandrosoana ny nataon-dry zareo amin'ny fanatsarana ny kolotsainan'ny tontolon'ny bilaogy sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra. Etsy ankilany, ny tranonkala nentim-paharazana sy ny vavahadin-tserasera, tahaka ny MSN, QQ, Sina sy Sohu dia samy niditra tao amin'ny tsena vaovao nitombo haingana, izay miha-mahazo ny ampahany betsaka amin'ny tsena.
Raha ny isan'ireo blaogy, tena sarotra kajiana araka ny tokony ho izy ny tena isan'ireo bilaogy sy bilaogera. Na dia nametram-panontaniana momba ireo antontan'isa avy amin'ny Baidu aza ireo bilaogera sasany, tsy azo lavina ny zava-misy fa tamin'ny taona 2005, nitombo be ny isan'ireo bilaogy Shinoa. Afaka manaporofo ny fitomboan'ny bilaogy amin'ny teny Shinoa ihany koa ireo milina fikarohana bilaogy sasany araka ny asehoan'ny andrana nataon'i Keso (ao ZH).
Ankoatra izay, nirongatra ny vondrona mpitari-kevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy. Mazàna izy ireo nahita fianarana, mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny vaovao amin'ny sehatra sasantsasany. Ny tena zava-dehibe indrindra, dia maro amin'ireo voninahiny no azo tamin'ny alalan'ny bilaogy, tahaka an'i Keso, Mumu, Anti sy Milk Massage (Izay mpandresy tamin'ny Bilaogy Tsara Indrindra DW). Miha maro ihany koa ireo olona lasa nihaona sy zatra bilaogy, nanjary fitaovam-baovao sy fitaovam-pifandraisana ara-dalàna ary fanehoan-kevitra ny bilaogy, ary efa matotra kokoa sy isan-karazany kokoa ankehitriny ny fomba fanoratana bilaogy.
Manomboka amin'ny fitantaran'ny haino aman-jery momba ny sehatra fibilaogina, sy avy amin'ny gazety sy ny gazetiboky, afaka mahatsapa ny fankatoavan'ny haino aman-jery ny bilaogy isika. Nitantana tantara na zavatra manokana tao amin'ny pejiny voalohany ny Economic Observer sy Life Weekly. Nahatratra ny fara-tampony ity karazana fifantohana ity tamin'ny volana Novambra, raha natao tao Shanghai ny Fihaonambe voalohany ny Bilaogera Shinoa. Eo ambany ny tara-pahazavana, lasa fampiharana goavana amin'ny aterineto ny bilaogy.
Ho an'ny antony sasany toy ny sivana, tena mihisatra ireo bilaogy Shinoa amin'ny fananganana ny hevi-baovao eny ifotony, na ny fitateram-baovaon'olon-tsotra. Mbola tena vitsy ireo olona mandray ny bilaogy ho fampahalalam-baovao; fa kosa maniry haneho ny fahatsapana fiainana kokoa fa tsy hevitra ara-politika izy ireo.
Mbola ny olana momba ny sivana no fanontaniana lehibe indrindra ho an'ny bilaogy Shinoa. Satria nivoatra ny tontolon'ny bilaogy, dia toy izany koa ny manda afo lehibe. Nakatona misesy ny Blogsome, Typepad sy Blog-City, ary avy eo mbola nakaton'ny governemanta ny Blogspot, taoriana kely. Nametraka fanarahamaso henjana sy famerana bilaogera ny fametrahan-dalàna izay mitaky amin'ireo tranonkala rehetra mba hanoratra ny anarana tena izin'ny mpitantana, sy ny Fitsipika momba ny Vaovao amin'ny Aterineto sy ny Tolotra momba ny Vaovao. Na inona na inona vokatry ny fepetra toy izany, hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny bilaogy amin'ny ampahany betsaka ny sivana.